I-China iFibre Optical Solution Abavelisi kunye nabaXhasi - iChaolian Elektroniki
Ikhaya > Iimveliso > Inkqubo yeFiber Optic > Isisombululo seFiber Optical
Isisombululo seFiber Optical esenziwe e-China sinokuthengwa kwi-Chaolian Electronic ngamaxabiso asezantsi. Umvelisi oqeqeshiweyo kunye nomzi mveliso weemveliso ezikumgangatho ophezulu eChina.
I-FO Pigtail SC / PC SM 9/125 0.9mm Simplex
Le yi-FO Pigtail SC / PC SM 9/125 0.9mm Simplex. Kananjalo ungenza i-UPC, i-APC .Sibonelela ngentambo yepatch ngaphezulu kweminyaka engama-20, njengenkampani evunyiweyo ye-ISO, i-sur-link yenza inkqubo yoqinisekiso lomgangatho olungqongqo, iimveliso zethu zanikezela nokuvunywa komgangatho wamazwe angqinisisiweyo yi-CE, ETL, UL njl.
FO Patch Intambo MTRJ / PC-MTRJ-PC SM 9/125 Duplex
Le yi-FO Patch Cord MTRJ / PC-MTRJ-PC SM 9/125 Duplex, nawe unokwenza iMM, i-Simplex .. Sinikezela ngentambo yepatch ngaphezulu kweminyaka engama-20, njengenkampani evunyiweyo ye-ISO, i-sur-link yenza umgangatho ongqongqo Inkqubo yoqinisekiso, iimveliso zethu zikwabonelela ngeemvume ezisemgangathweni zamanye amazwe eziqinisekiswe yi-CE, ETL, UL njl.
I-FO Pigtail SC / APC SM 9/125 0.9mm i-Simplex
Le yi-FO Pigtail SC / APC SM 9/125 0.9mm Simplex. Kananjalo ungenza i-UPC, i-PC .Sibonelela ngentambo yepatch ngaphezulu kweminyaka engama-20, njengenkampani evunyiweyo ye-ISO, i-sur-link yenza inkqubo yoqinisekiso lomgangatho, iimveliso zethu zikwabonelela ngeemvume ezisemgangathweni zamanye amazwe eziqinisekiswe yi-CE, ETL, UL njl.
I-FO Pigtail ST / i-PC SM 9/125 0.9mm i-Simplex
Le FO Pigtail ST / PC SM 9/125 0.9mm Simplex isetyenziswa ngokubanzi ezindlwini, kwiinkampani, kumaziko okufundisa nakwezinye iinkqubo zekhabhathi eyakhiweyo, njengee-fiber fiber sensors kunye nokunxibelelana ngomnxeba. ithobela izatifikethi ezininzi.
I-FO Bundle Pigtail SC MM 62.5 / 125 12 yeFayibha eneBhanti yokuSonga eQhelekileyo
Le FO Bundle Pigtail SC MM 62.5 / 125 12 Fibre ene-Spiral Wrap Band isetyenziswa ngokubanzi ezindlwini, kwiinkampani, kumaziko okufundisa nakwezinye iinkqubo zekhabhathi eyakhiweyo, njengee-fiber fiber sensors kunye nokunxibelelana ngomnxeba. Yenziwe ngezinto ezikumgangatho ophezulu kwaye inokwakhiwa okuhle oko kuyenza ithobele izatifikethi ezininzi.
I-FO Bundle PIGTAIL FC SM 9/125 12 Ifayibha
Le FO Bundle PIGTAIL FC SM 9/125 12 Ifayibha isetyenziswa ngokubanzi ezindlwini, kwiinkampani, kumaziko okufundisa nakwezinye iinkqubo zekhabhathi ezakhiweyo, njengee-fiber fiber sensors kunye nokunxibelelana ngeminxeba. ngezatifikethi ezininzi.
I-Chaolian Electronic yenye yezobuchwephesha Isisombululo seFiber Optical abavelisi kunye nabathengisi e China. Umzi mveliso wethu ubonelela ngoluhlu lwamaxabiso. I Isisombululo seFiber Optical eveliswe ngumzi mveliso wethu yamkelwe kakuhle ngabathengi ngexabiso eliphantsi. Wamkelekile ukudibana.